Govt, CITIC in Talks on $1.3 Billion Kyauk Phyu Deep Sea Port | Myanmar Business Today
Home Business Local Govt, CITIC in Talks on $1.3 Billion Kyauk Phyu Deep Sea Port
Govt, CITIC in Talks on $1.3 Billion Kyauk Phyu Deep Sea Port
Myanmar growth development economy SEZ Essar Kyaukphyu construction port labour.
China’s CITIC consortium and the Myanmar government plan to build Kyauk Phyu Deep Sea Port with CITIC providing 70 percent of the funding needed and the remaining 30 percent to come from the government.
The two sides are in talks to invest $1.3 billion in the first phase of the project, according to recent remarks by Deputy Commerce Minister U Aung Htoo to the Pyithu Hluttaw.
CITIC and local consortium Myanmar Kyauk Phyu Special Economic Zone will invest $30 million in the industrial zone that forms part of the megaproject. CITIC will hold 51 percent of the project and Myanmar Kyauk Phyu 49 percent.
The economic zone will compriseadeep sea port on 607 acres,a2,446-acre industrial zone anda1,235-acre high-end housing project.
Myanmar special economic zones’ governing body first announced plans to build Kyaukphyu SEZ in 2015. It is preparing to call tender applications forafeasibility study, social impact assessments and geological surveys.
CITIC announced in July 2019 that it had hired Canadian firm HATCH to conduct environmental and social impact assessments (ESIA) for the deep sea port project.
The economic zone’s governing body and CITIC signedaframework agreement for the deep sea port on November 8, 2018 and have exchanged MoU on shareholding.
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ဘီလီယံ ကနဦးအဆင့်အသုံးပြုရန် ညှိနှိုင်းနေ
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ ပထမအဆင့်တွင်ပါဝင်သော ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံ CITIC Consortiumမှ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာဘက်က(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း ကိုလည်း CITIC Consortium ဘက်မှ ရှယ်ယာအချိုး ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘက်မှ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ဖြင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးက ပြောသည်။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၏ ပထမအဆင့်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၃ ဘီလျံဖြင့် ဖော်ဆောင်ရန် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိပြီး စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ဖြင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းအပြင် စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံ CITIC Consortium နှင့် မြန်မာ ဘက်က ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(၄၂)ပါဝင်သော မြန်မာ-ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဟိုးလ်ဒင်း ကုမ္ပဏီအုပ်စုအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၏ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် ၆၀၇ဒသမ၈၈ ဧက၊ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်းအတွက် ၂၄၄၆ဒသမ၀၇ ဧကနှင့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် ၁၂၃၅ ဒသမ ၃၇ ဧက ပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် မြေဧရိယာကို ၄၂၈၉ ဒသမ ၃၂ ဧကကို မြန်မာစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့က ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဘူမိနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါရေနက်ဆိပ်ကမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဘဝထိခိုက်မှုများ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း(ESIA)များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကနေဒါအခြေစိုက် HATCH ကုမ္ပဏီကို ငှားရမ်းထားကြောင်း တရုတ်CITIC ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၉ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၌ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းအပြင် ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းမူဘောင်သဘောတူချက်(Framework Agreement) ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အစုရှယ်ယာများ နှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူစာချုပ်စာချွန်လွှာများကို ဇုန်ကော်မတီနှင့် CITIC ကုမ္ပဏီအကြား လဲလှယ်ခဲ့ ကြသည်။
Previous articleAYA Bank to Launch Mobile Wallet
Next articleReal Estate Tax Revenue Up by K11 Billion in Q1 Fiscal 2020